Author: Mezijinn Nikolrajas
Xeeladahaasi la adeegsaday ayaa ka baxsan sharciga, waxaana ay weriyayaasha khatar weyn cjsub gelinayaan in laga aarsado. April 28, Photograph. Somalia edges closer to famine as millions struggle without food December 28, Ka caawisaa dadka aan awoodin ama aan rabin in ay ku laabtaan deegaannadooda, sidii ay u degi lahaayeen magaalooyinka waayen oo ay dadka u dhexgeli lahaayeen, ayadoo siinaysa hooy asaasi ah.
Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Qodobka 3aad — Sarraynta Dastuurka 1. Xukuumadda oo kaashanaysa howlwadaageeda caalamiga ah, wadatashina la yeelanaysa dadka soo barakacay, waa in mudada dhexe ay:.
Maamulladii hore ee Soomaaliya iyo howlwadaagooda caalamiga ah ayaa aqoonsaday meelaha u baahan dib u habaynta si loo wanaajiyo xaaladda xuquuqda aadanaha, oo ay ka mid tahay Fulinta Qorshe Howleedka Xuquuqda Aadanaha eeiyo in ay garawsadeen baahida loo qabo in arintaasi lagala shaqeeyo eee wasaaradaha iyo waaxaha. Dowladda oo kaalmo ka helaysa caalamka waa in ay: Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha soomawliya ee Rayidka.
Maamulkii hore soomaaiya uu ku guuldaraystay in uu hogaan u yeelo arinta dadka soo barakacay, taasoo dhalisay in la qeexi waayo cidda ay tahay in ay dusha kala socoto, federaalka ama dowladda hoose.
Waa in gun-dhig looga dhigaa dib u habaynta ammaanka Soomaaliya ee hadda laga doodayo helitaanka isla xisaabtan, gaar ahaan samaynta hannaan xaqiijin iyo dusha kala socosho ah si meesha looga saaro taliyayaasha iyo askarta tacaddiyada geysta, kuwa cusub iyo kuwa hadda joogaba, iyo weliba in la xoojiyaa goobaha qaran iyo kuwa caalamiga ah soomaqliya ay dhibbanayaasha xaqooda ka heli karaan. Tan iyo bishii Novemberugu yaraan 60, oo qof ayaa xoog looga raray xeryahooda.
Xukuumadda iyo baarlamaanka waa in ay:. Dalka Afgaanistaan waxaa shardi looga dhigayey qofka madaxweynaha in uu muslim ahaado, in aanu heysan dhalasho kale iyo wixii la mid ah. Mudada kooban, dowladda Soomaaliya, gaar ahaan baarlamaanka, iyo wasaaradaha caddaalada iyo amniga gudaha waa in ay:.
Xukuumadda, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha soomzaliya in mudada dhexe ay: Waxaa aad muhiim u ah samaynta ciidan boolis oo awood leh, lalana xisaabtami karo, kaasoo suga ammaanka asaasiga ah iyo xaqiijiyana xaqa ay dadka leeyihiin, gaar ahaan kuwa bulshada ugu nugul.
Inkastoo ay maamulladii hore isku dayeen in ay carruurta ka joojiyaan ku biiridda ciidamada heerka federaalka, oo ay saxiixeen qorshe howled qaran oo ka dhan ah askaraynta carruurta, isla markaana ay wasaaradda gaashaandhigga u yeeleen cutub ilaaliya carruurta, ayaa haddana waxaa loo baahan yahay dusha kala socosho joogta ah, si carruurta gebi ahaanba looga saaro dastuurk.
Diintaas ayay soomaalya yihiin gabadha iyo ninkeeda ee dastuuka Dastuurka Soomaaliya. Waxaa intaa dheer in dalalka ay ciidamada ka socdaan ay ku guuldaraysteen in macluumaadka ku aaddan eedeymaha iyo baaritaannada ay sameeyeen ay la wadaagaan hogaanka AMISOM, dhinacyada kale ee ay khusayso, iyo weliba dhibbanayaasha.
Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1. Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Tusaale ahaan, horaantiimaamulka Puntland ayaa ogolaaday in koox dhalinyaro ah oo laba gabdhood ku kufsaday degmada Galdogob lagu maxkamadeeyo shareecadda Islaamka.
Soomaaliya waxaa ku badan tacaddiyada galmada la xiriira, kuwaasoo burburiya xuquuqda dumarka, isla markaana abuura khatar muddo dheer ah oo ku aaddan ammaanka iyo caafimaadka haweenka. Ayadoo qeyb ka ah dadaalka lagu difaacayo shacabka nugul, ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arimaha gudaha ee federaalka iyo maamul goboleedyadaba iyo weliba maamulka gobolka Benaadir in ay: Si degdeg ah u joojiyaan xoog ku raridda dadka soo barakacy ee ku nool Muqdisho iyo deegaannada kale ee ay dowladda ka taliso; Golaha wasiiradda marsiiyan ayna dhaqan geliyaan siyaasadda barakaca ee ; Caddeeyaan dowrka kaga aaddan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo maamullada maxalliga ah arinta dadka kusoo barakacay magaalooyinka; iyo, Si degdeg ah u geeyaan boolis tayaysan deegaannada ay ku yaallaan xeryaha aan rasmiga ahayn ee magaalooyinka waaweyn, si loo suggo ammaanka asaasiga ah, loogana hortago tacaddiyada ka dhanka ah dadka soo barakacay.
NISA ayaa samaysay howlgalo ballaaran oo ammaanka lagu sugayo, inkastoo aanay awood sharci u haysan in ay dadka qabqabato ama xirto. Garsoorka oo Lagu Sameeyo Dib u habayn Dheeraad ah oo Wax ku ool ah Inkastoo ay si shaacbaxsan u ballanqaadeen dib u habaynta garsoorka, ayaa haddana maamulladii hore waxa ay si weyn ugu tiirsanaayeen maxkamadda ciidanka ee dalka, si ay u qaado kiisaska la xiriira ammaanka qaranka.
Dadka aaminsan diintan waxay qabaan in boqorkii Itoobiya Xeyle Salaase uu yahay “Ilaaha kaliya” ee mudan in la caabudo.
Maxkamadaha madaniga ah ayaa la sheegaa in ay hareeyeen siyaasado qabiil ku salaysan, musuqmaasuq, iyo in aanay dusha kala socon dacwad oogayaasha. Dowladda Soomaaliya ayaan inta badan baarin cabashooyinka ay u gudbiyaan weriyayaasha ama dilalka iyo dhaawacyada loo geysto, ayadoo sidoo kalana aan dacwad kusoo oogin kuwa falalkaasi geysta. Inkastoo uu maamulka cusub wajahayo caqabado badan, ayaa haddana waxaa suuragal ah horumar degdeg ah, sida in la xaqiijiyo in xubnaha ka tirsan ciidamada ammaanka ama maleeshiyaadka dowladda taabacsan ee galay tacaddiyada xuquuqda aadanaha laga rusqeeyo ciidamada ama aan lagu darin qaab-dhismeedka cusub ee ammaanka.
Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Dowladdu waa in mudada dhexe ay ka shaqeysaa xaqiijinta dib u habaynta dhinacyada ammaanka iyo garsoorka:. Waxaa intaa dheer in dhawaan un loo soo jeestay sidii loo dhisi lahaa tayada booliska iyo waaxda dembi barista, si ay u sameeyaan baaritaanno xooggan oo wax ku ool ah, laguna ilaalinayo xuquuqda dadka.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Ssoomaaliya, ayaa dasthurka hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada. Hannaanka siyaasadeed ayaa waxaa gacanta ku haya ragga, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya hogaamiyayaasha beelaha.
Human Rights Watch lama socoto wax dacwad ah oo sanadihii dhawaa lagu soo oogay saraakiil dowladda ka tirsan ama askarta ciidamada, kuwaasoo loo ciqaabay tacaddiyo ay u geysteen weriyayaasha, inkastoo ay jirto caddeyn muujinaysa in ay qeyb ka ahaayeen weerarrada. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan NISA iyo ciidanka booliska, ayaa adeegsaday qaabab kala duwan si ay weriyayaasha ugu qasbaan in ay arimaha jira uga warramaan sida ay dowladda rabto.
Qodobka 4aad — Gobannimada Jamhuuriyadda 1. You are here Home. Xaqiijisaa in xubnaha laamaha sirdoonka iyo booliska ee galay tacaddiyada qaab ku haboon loo maxkamadeeyo, ayagoo lasoo taagayo maxkamado madani ah; iyo, Qaadaa tallaabooyin la mid ah kuwa mudada kooban iyo mudada dhexe ee looga gol leeyahay in lagu sameeyo kala shaandheyn inta ay socdaan qoridda iyo isku dhafka booliska iyo sirdoonka, si la mid ah tallaabooyinka kor lagu soo xusay ee khuseeya milateriga.
Ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka taabacsan ayaa sidoo kale dad rayid ah ku beegsaday dagaalo beeleed siyaasadaysan.
Qorshayaasha hadda socda ee cusyb aaddan qaab-dhismeedka ammaanka qaran ee Soomaaliya ayaa iska indha tiray laamaha sirdoonka. More foreign airlines to launch flights to Somalia amid improved security: Xukuumadda iyo baarlamaanku waa in mudada dhexe ay: Madaxweynaha — oo hadda booqasho rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Dowladda Soomaaliya waa in ay qaadaa tallaaba kasta oo macquul si looga hortago arintaasi, oo ay ka mid tahay meelmarinta shuruucda lagama maarmaanka u ah. Waxaa tacaddiyadaasi ka mid ah weerarro aan kala sooc lahayn, dil, kufsi, jirdil, xarig aan loo meeldayin, iyo boob. Legalizing Stolen Fish December 28, Sections of this page.
Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray.